(မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလံ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလံ​တော်သည် ပြည်​ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ​တော်ကို ကိုယ်စားပြု​သော အလံ​တော်ဖြစ်သည်။လက်ရှိအသုံးပြု​နေ​သော အလံ​တော်ကို ၂၀၁၀ခုနှစ် ​အောက်တိုဘာလ၂၁ရက်​နေ့တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
၃ စံပြုအရွယ်အစား၊အတိုင်းအတာနှင့် အ​ရောင်အ​​​သွေး
၄ နိုင်ငံ​တော်အလံ အသုံးပြုခြင်း
၇ ၂၀၁၉ခုနှစ် အလံသစ်အဆိုပြုခြင်း
၈ သမိုင်းတလျှောက် မြန်မာ့အလံများ
အလံ​တော်တွင် အဝါ၊အစိမ်း၊အနီ​ရောင်တို့ ​အောက်ခံအဖြစ် ပါရှိခြင်းမှာ လွတ်လပ်​ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းက အသုံးပြုခဲ့​သော သုံး​ရောင်ခြယ်အလံကို အ​လေးမြတ်ပြု ​ဖော်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။
အဝါ​ရောင်သည် စည်းလုံးခြင်း၊ညီညွတ်ခြင်း၊ဉာဏ်ပညာကြီးမားခြင်း၊​ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့် တိုင်းရင်းသားအားလုံး စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိခြင်း
အစိမ်း​ရောင်သည် ​မြေဆီဩဇာကြွယ်ဝခြင်း၊ ညီညွတ်မျှတခြင်းနှင့် ​အေးချမ်းသာယာ၍ စိမ်းလန်းစိုပြည်သည့်နိုင်ငံဖြစ်ခြင်း
အနီ​ရောင်သည် ရဲရင့်ခြင်းနှင့် ပြတ်သားခြင်း
ကြယ်၏အ​ရောင်ဖြစ်​သော အဖြူ​ရောင်သည် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း၊​ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်း၊ကရုဏာတရားပြည့်ဝခြင်းနှင့် စွမ်းအင်နှင့်ပြည့်စုံခြင်း ဟူ​သောအဓိပ္ပါယ်များကို ​ဖော်ညွှန်းသည်။
နိုင်ငံ​တော်အလံ၏ စံပြုအရွယ်အစားမှာ ​ထောင့်မှန်စတုဂံပုံဖြစ်ပြီး အလျား၉​ပေ၊ အနံ၆​ပေဖြစ်သည်။
နိုင်ငံ​တော်အလံ၏​အောက်ခံအ​ရောင်ဖြစ်​သော အဝါ၊အစိမ်းနှင့် အနီ​ရောင်တို့မှာ အနံ၆​​ပေကို သုံးပုံတစ်ပုံစီဖြစ်၍ တစ်​ရောင်လျှင် ၂​ပေဖြစ်သည်။
ထို​အောက်ခံ​ပေါ်တွင် ​ရောင်ခြည်လက်တံငါးခုပါ​သော ကြယ်ဖြူကြီးတစ်လုံးပါရှိသည်။ထိုကြယ်ဖြူကြီး၏ အ​​ပေါ်ကြယ်လက်တံသည် အလံ​တော်အလျား၏ တစ်ဝက်ဖြစ်​သော ၄​ပေ၆လက်မနင့် တည့်တည့်​နေရာတွင်ရှိပြီး အထက်သို့ မတ်မတ်ညွှန်းရမည်။
ကြယ်၏ အ​ပေါ်ထိပ်မှ အဝါ​ရောင်အနားသတ်အထိ အကွာအ​ဝေးနှင့် ကြယ်၏​အောက်ဘက်ရှိ ကြယ်လက်တံနှစ်ခုမှ အနီ​ရောင်အနားသတ်အထိ အကွာအ​ဝေးတို့သည် ၁​ပေစီရှိရမည်။
ကြယ်လက်တံထိပ်တစ်ခုနှင့် တစ်ခုသည် ၂​ပေ၇.၂လက်မစီ အကွာအ​ဝေး တူညီရမည်။
နိုင်ငံ​တော်အလံကို အသုံးပြုရာတွင် ပြဋ္ဌာန်းထား​သော ဥပ​ဒေ၊နည်းဥပ​ဒေများနှင့် အညီအသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ​ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပြီး ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ၃နှစ်ထက်မပို​သော ​ထောင်ဒဏ်ဖြစ်​စေ၊​ငွေဒဏ် ၃သိန်းဖြစ်​စေ၊ ပြစ်ဒဏ်၂ရပ်လုံးဖြစ်​စေ ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
ယခင် ပြည်​ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ​တော်ဆိုင်ရာ အရပ်သုံးသ​​​င်္ဘောသုံးအလံ (1952–1974).
ယခင် ပြည်​ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အရပ်သားသင်္ဘောသုံးအလံ (1974–2010).
သမ္မတအိမ်​​တော်တွင် နိုင်ငံ​တော်အလံ လွှင့်ထူထားစဉ်
၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအ​ခြေခံဥပ​ဒေပြင်ဆင်​ရေးအတွက် နိုင်ငံ​ရေးပါတီများမှတင်ပြချက်များတွင် နိုင်ငံ​ရေးပါတီ​လေးခုဖြစ်​သော အမျိုးသားဒီမိုက​ရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ရှမ်း တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၊ဇိုမီး ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊အမျိုးသားညီညွတ်သောဒီမို ကရက်တစ်ပါတီတို့မှ နိုင်ငံ​တော်အလံအသစ်ကို တင်ပြထားကြသည်။
Flag of the State of Burma ၁၉၄၃၊ ဩဂုတ် ၁-ရက် => ၁၉၄၅၊ မေ ၃-ရက်
↑ ၄.၀ ၄.၁ နိုင်ငံ​တော်အလံ ဥပ​ဒေနှင့်နည်းဥပ​ဒေများpublisher=အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာနိုင်ငံ၏_အလံတော်&oldid=495861" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။